Zimbabwe News Journal | African News Journal
Zimbabwe News Journal Zimbabwe’s plea for poll cash must go to Sadc, says Gordhan
By MacDonald Dzirutwe HARARE (Reuters) - Zimbabwe's mining chamber said tighter proposed state control over the sale of minerals would hit Anglo American Platinum and Impala Platinum Holdings Ltd, slow down foreign investment and stunt growth in the industry. Zimbabwe's mines ministry in March produced a draft Minerals Policy, which seeks to increase state participation in exploration, mining ...
Zimbabwe: Resistance Hinders Circumcision Programme
[Zimbabwe Standard]PROMOTERS of the male circumcision programme need to go back to the drawing board after only 8% of the targeted people responded positively to their campaign.
The Chamber of Mines of Zimbabwe , which represents companies including Impala Platinum Holdings Ltd. (IMP) , rejected a proposal for the state to control mineral production and prices, a draft response from the industry organization obtained by Bloomberg News shows.
Zimbabwe PM vows to reverse Mugabe's companies take-over drive
Zimbabwe's Prime Minister Morgan Tsvangirai wrapped up his party's post-election plan meeting Sunday vowing to overturn President Robert Mugabe's controversial indigenisation drive if he wins upcoming general elections.
[Zimbabwe Standard]The MDC president Morgan Tsvangirai has laid out his vision for a new Zimbabwe under his rule, promising citizens justice, freedom and happiness.
[Zimbabwe Standard]Villagers from Goromonzi's Yafele area have said their livelihoods are under threat following the encroachment of urban developments into their area.
[Zimbabwe Standard]Chipinge -Two notorious oil dealers, who have been wreaking havoc in and around Chipinge draining electricity transformer oil, finally met their fate last week when they were jailed for an effective 10 years.
[Zimbabwe Standard]Adolescent girls aged between 15 and 19 constitute a quarter of the 960 women that die as a result of pregnancy-related complications in Zimbabwe, the United Nations Population Fund (UNFPA) has said.
[Zimbabwe Standard]THE MDC-T government plans to have legislation that would govern the operations of the Central Intelligence Organisation (CIO), among a raft of reforms designed to create a professional security outfit.